म प्रधानमन्त्री हुन सडकमा होईन जनताको लागि हो: प्रचण्ड
नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) दाहाल–नेपाल समूहका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले आफूहरुले पदको लागि आ,न्दोलन वा संघर्ष नगरेको स्पष्ट पारेका छन् । “उनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मुलुकमा ल,डेर ल्याए
परिवर्तन र संविधानमाथि प्रहार गरेकोले त्यो जोगाउनको लागि आ,न्दोलन गरेको स्पष्ट पारेका छन् । आज मिडिया एलायन्सका पदाधिकारीसँगको अन्तरक्रियामा बोल्दै दाहालले यस्तो बताएका हुन् । उनले–‘हामी प्रधानमन्त्रीको लागि
लडिएको होईन् । तपाईहरुलाई त्यस्तो लागेको छ भने ठूलो गल्ती हुनेछ । संविधान बचाउने, परिवर्तन जोगाउने चिन्ता हो । हामी, नेपाली कांग्रेस, जनता समाजवादी र नागरिक समाज ओलीको प्रतिगमनको वि,रोधमा छौं ।’ “सरकारलाई काम गर्न
दिईएन भनेर प्रधानमन्त्री ओलीले लगाएको आ,रोपमा कुनै सत्या नरहेको पनि उनले जि,किर गरे । उनले भने,‘कसैले देखाउन सक्छ ? नीति तथा कार्यक्रम फेल गर्न खोज्यौं ? कुन कुरामा बा,धा पुर¥यायौं ? उहाँले जे मन लाग्यो, त्यही गर्दै
जाने अनि हामीले हेर्दै जाने त हुन सक्दैन् । गणतन्त्रप्रति उहाँको मन थिएन । संघीयत पनि उहाँलाई मन परेको थिएन । न सचिवालय, न स्थायी कमिटी, न केन्द्रीय कमिटी, न संसद कतै उहाँको बहुमत छैन् । लोकतन्त्र भनेको बहुमत हो ।
अल्पमत प्रतिपक्ष हो । “बहुमतको निर्णय पार्टीको निर्णय हुन्छ । यो एलायन्सका सबै अधिकारीहरुसँग मेरो विनम्र अनुरोध छ–अहिलेको संघर्ष भनेको सत्य र असत्यको संघर्ष हो । कित्ता
क्लियर गर्नैपर्यो । मिडिया विद्येयक हामीले वि,रोध गर्यौं । तपाईँहरुले पनि वि,रोध गर्नुभयो । गुठी विद्येयक ल्याउँदापनि सल्लाह भएन । नेवार समूदायका सबै संस्थाहरु पार्टी र सरकारवि,रुद्ध उत्रिए ।’
प्रकाशित मिति February 12, 2021
बधाई छ !!! २० दिने शिशुले जिते कोरोना (सक्दो सेयर गर्नुहोस)
लुटने भए गरिबको कमाई: चार्टर्ड उडानको नाममा २० हजारको टिकटलाई ९० हजार असुल्दै
ओलीकाे आग्रह: कसैलाई काखापाखा गर्दिन, सामूहिक राजीनामाको अपराध नगर्नुस् (विज्ञप्तीसहित)
किस्ता किस्ता गरेर अब थप एक महिना निषेधाज्ञाको यस्तो तयारी
अमेरिका जाने DV 2022 चिट्ठा पर्ने सम्पुर्ण नाम र ठेगानाको पूरा विवरण
ल हेर्नुहोस यी १० जिल्लामा जहाँ अहिले पनि खुलेआम हिँड्न पाइन्छ (सूचीसहित)
पैदल हिडेर, आफ्नो सरकारी गाडी मार्फत एम्बुलेन्सको सेवा दिंदै गाउँपालिका अध्यक्ष सीता
सम्पुर्ण नेपाली जनता ढुक्क हुनुहोस अबको चुनावमा कांग्रेसले बहुमत ल्याउँछ: ओली
कोरोना को औसधिले १००% काम गर्न थाल्यो २ दिनमा कोरोना चैट (भिडियो सहित)
खुसीको खबर कोरोनको निशुल्क उपचार अब रबि लामिछानेको टिमले गर्ने (सक्दो सेयर गर्नुहोला)
खुसिको खबर: चीनले नेपाललाई १ अर्ब रुपैयाँको स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गर्ने (सक्दो सेयर गर्नुहोस)